बाबुरामज्यू वहस गर्न टुडिखेल होइन अन लाईन आउनुस ! – Complete Nepali News Portal
बाबुरामज्यू वहस गर्न टुडिखेल होइन अन लाईन आउनुस !
January 18, 2017	6,974 Views
बाबुराम ज्यू मैले यो लेख ठ्याक्कै तपाई को “ओलीजीसँग भारतीय हस्तक्षेप रोक्ने समाधान के छ ? टुँडीखेलमा बहस गर्न तयार छु” शिर्षक को लेख एउटा अन लाईन पत्रिकामा पढे पछि लेख्दै छु । यसको अर्थ यो न लगाउनु होला कि म तपाईको उक्त लेखको प्रत्यक्ष्य प्रतिक्रिया स्वरुप यो लेख लेख्दै छु, सायद तपाईको लेखको जवाफ त ओली ज्यु स्वयम् अथवा वहाँका राजनीतिक आफन्तहरुले देलान । मलाई त केहि समय अगाडी देखि नै तपाईको कन्सिस्टेण्ट इनकनसिस्टेन्टसी देखेर निकै खट्किएको छ, तपाईको यो लेखले चाही तत्कालै कलम चलाई हाल्न प्रेरित गर्यो ।
तपाईको वर्तमान राजनीतिक धरातल विहिन अवस्थाको छटपटी सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ, जसको फलस्वरूप तपाई कहिले के वक्नु हुन्छ, कहिले के । यो छटपटी तपाईको व्यक्तिगत मात्रै हो कि तपाई जसको आजभोलि विरोध गरे जस्तो गर्नु हुन्छ त्यसको पनि हो, यसको ब्याख्या विश्लेषकहरुले गर्लान नै।
कृपया मेरो लेख बाट यो पनि अर्थ न लागोस कि म ओली भक्त हो, तपाईको जानकारीको लागि यति भन्छु कि म ओली ज्युको एमाले अध्यक्ष्य हुने बेला सम्म पनि आलोचक नै हो, त्यसपछि बरु वहाँले अगाडी सारेका केहि मुद्दाहरुमा मेरो समर्थन छ।
एक छिन मैले भर्चुअली बुझेको बाबुराम ज्युको बारेमा छोटोमा भन्न चाहन्छु। तपाई एउटा सामान्य किसान परिवारबाट आफ्नो पालाको एस एल सी वोर्ड प्रथम, आर्कीटेक्ट इञ्जिनिएर, र पछि पीएच. डि. सम्म को अध्ययन गरेको व्यक्ति । सुने अनुसार पढाईमा सधै अब्बल नै रहनु भयो । पढाईमा यति अब्बल हुदाहुदै पनि नेपालमा “खराब खेल” भनेर स्थापित भएको राजनीतिलाई तपाईले रोज्नु भयो, जसलाई तपाई स्वयम् ले र धेरै अरुले पनि तपाईको त्यागको रुपमा विश्लेषण गरेको पाइन्छ । सुनेको छु कि देश कै पुन संरचना गर्नु पर्ने महशुश गरेर राजनीतिमा लाग्नु भएको हो रे । यत्रो पढे लेखेको विद्वान मान्छेले जे गर्नेछ राम्रै हुनेछ र एक दिन देशको कार्यकारी प्रमुख भएर काया पलट गर्ने छ भन्नेहरु धेरै थिए । यहाँ सम्म त तपाईलाई मन न पराउने को नै पो होला र ?
तपाईले यथार्थमा चाही के गर्नु भो : २०५१ साल देखि कथित जन युद्ध (मान्छे मार्ने काम) थाल्नु भयो, हजारौं वालवालिकाहरुलाई टुहुरो बनाउन, कतिको सिन्दुर मेट्न, घरवार विहिन वनाउन, भौतिक संरचना भत्काउन, देशलाई जातिय द्वन्द उन्मुख वनाउन निर्णायक तहमा ( भौतिक रुपमा त धेरै जसो भारत मै बस्नु भो भन्ने सुनिन्छ ) रहेर भूमिका खेल्नु भो ।
त्यो तथा कथित जन युद्ध छोडेर आफ्नै स्व विवेकले हो अथवा कुनै प्रभु (जसले युद्धका लागि अर्हाएको थियो अथवा गर्न सघाई रहेको थियो ) को आदेश अनुसार हो सिधै संसदीय खेलमा लागेर प्रधानमन्त्रिको पद पनि पड्काउन भ्याउनु भयो ।
भुकम्प पछाडीको पुन संरचना प्राधिकरणको जिम्मेवारी पनि लिन प्रयास गर्नु भो तर तपाई को तत्कालिन अध्यक्ष ले तपाई अगाडी बढेको के देखि सहन्थे र? कुरै अगाडी बढ्न दिएनन्, अरु पार्टीहरुले पनि हुन त के दिन्थे!
दोस्रो संबिधान सभामा आफै संबिधान वनाउने निर्णायक तहमा रहनु भयो, संबिधान वनाउनु पनि भयो तर लगत्तै आफ्नो रुप फेर्नु भयो । जन युद्धका नाममा गरेका पापहरुको जिम्मा लिनु भन्दा पनि त्यसको भारी प्रचण्डको टाउको मा थुपारेर आफु चोखो बन्ने प्रयास पनि गर्नु भो ।
मधेश आन्दोलनको नेतृत्व लिएर राजनीतिक लाभ लिन सकिन्छ कि भनेर पनि प्रयास गर्नु भयो, जुन एकदमै अस्वाभाविक थियो । जुन पार्टीबाट प्रधानमन्त्री सम्म हुनु भयो त्यसलाई समेत तिलान्जली दिन पछी पर्नु भएन। (तपाईले गरेको काठ्माण्डौको सडक चौडा गर्ने काम र अर्थ मन्त्रि भएको बेला अगाडी सारेका केहि कार्यक्रमको चाही म प्रशंशक नै हो।)
नयाँ शक्तिको नाममा राजनीतिक दलहरुबाट दिक्क भएका बहुसंख्यकहरुलाई आफु तिर तान्न पनि भरपुर प्रयास गन्रु भयो तर केहि स्वार्थी र महत्वाकांछी बाहेक नेपालीहरु त्यति वेवकुप किन पो हुन्थे र? तपाईको पछि लागेनन । तपाईको अवस्था यहाँ पुग्यो कि तपाईको राजनीतिक सिद्धान्त, दर्शन, आदर्श सबैले सामुहिक तिलान्जली पाए।
आजभोली तपाई घरि खस आर्य समुदाय लाई गालि गर्दै मधेशी जनता पछि लाग्छन कि भनेर प्रयास गर्नु हुन्छ, घरि भारतको विरोध गरे जस्तो गरेर पहाडियाहरु खुशी पार्ने प्रयास गर्नु हुन्छ । कहिले नेपालि टोपी प्रति घृणा व्यक्त गर्नु हुन्छ , कहिले करिश्मा देखाएर युवाहरुलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गर्नु हुन्छ तर २१ औं शताब्दी का नेपाली मुर्गा वनेर तपाईको पछि किन पो लाग्छन र?
अहिले तपाई पहाडी समुदाय बाट आश मारेरै होला सायद, एउटा क्षेत्रीय हैसियत पनि स्थिर रुपमा वनाई नसकेका उपेन्द्र यादबको शरणमा पुग्नु भएको छ । तपाई जस्तो विद्द्वान, प्रधानमन्त्रि भै सकेको व्यक्ति अझ कति सम्म तल झरेर क–कसको शरणमा पर्नु पर्ने हो थाहा छैन । सायद तपाईले गरेका पापहरुको श्राप तपाईलाई लाग्दै छ ।
तपाईको ग्रह दशा पनि तपाइको मानस पटल जस्तै उल्टो चलि रहेको जस्तो छ । केहि समय अगाडी तत्कालिन राष्ट्रपतिय उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रंपले गुनासो गरेका थिए मिशेल ओबामाले बोल्दा सबैले वाह वाहि गरे तर त्यहि कुरा उनकी श्रीमती मेलानियाले भन्दा कसैले राम्रो भनेनन् ।
तपाईको पनि दशा अहिले यस्तै छ, त्यहि नाकावन्दीको विरोध गर्दा ओली ज्यु रास्ट्रवादि हुन्छन तर त्यहि कुरा तपाईले गर्दा भारतीय दलाल भनिन्छ, सायद तपाईका पुर्व कर्महरु यसै लायक छन् कि!
अन्तमा, तपाईले सोधे झैं ओलीसंग भारतीय हस्तक्षेप रोक्ने समाधान के छ भनेर त वहाँले नै भन्नु होला तर मेरो विचारमा तपाई जस्ता केहि राजनीतिज्ञहरुले मात्र पनि सिमित स्वार्थ लागि अरुको अगाडी लम्पसार पर्नु भन्दा नेपाली जनतालाई विश्वाश गर्नु भयो भने भारतीय हस्तक्षेप त के तपाई कै पुर्व शब्दमा अमेरिकी साम्राज्यवाद पनि निस्तेज हुनेछ ।
जहाँ सम्म वहसको कुरा छ तपाई संग त तपाई का कर्महरुले गर्दा धेरैको आलोचना नै छ , वहस गर्न टुडिखेल होइन अन लाइन आउनुस !
सी आर भट्ट